Shiinaha Tungsten Carbide Nozzles Soo-saar iyo Warshad | N&D Carbide
* Dharka nabaad guurka
* Adeeg gaar ah
Qalabka loo yaqaan 'tungsten carbide nozzles' waxaa badanaa loo isticmaali doonaa jajabyada qodista 'PDC' iyo jajabyada rooga loogu talagalay biyo raaca, qaboojinta iyo tilmaamida qoditaanka daloolinta iyo nadiifinta guntinta dhagxaanta gunta hoose ee dareeraha qodista ee xaaladaha shaqada ee cadaadiska sare, gariirka, ciida iyo saamaynta saamaynta inta lagu gudajiro baaritaanka saliida iyo gaaska dabiiciga.
Tungsten carbide nozzles nozzles waxaa laga soo saaray cadaadis kulul oo leh ceel toosan iyo nooca ceelasha venturi. Adkaanta awgeed, cufnaanta hooseysa iyo xirashada aadka u wanaagsan iyo ka-hortagga daxalka, Tungsten carbide biiyaha ciida ayaa si weyn loogu isticmaalay sandblasting iyo qalabka wax lagu nadiifiyo oo la toogto, iyadoo la siinayo nolol dheer oo hawo wanaagsan leh iyo adeegsiga wax xoqid ah.
Tungsten carbide biiyaha lagu buufiyo ee saliida dufanka waxay leeyihiin qeexitaano kala duwan, oo la farsameeyay laguna sameeyay alaab tayo sare leh. Waxay leedahay astaamaha u adkaysiga heerkulka sare, iska caabinta daxalka, iska caabinta abrasion, saxsanaanta sare iyo wixii la mid ah.
Mashiinka Tungsten carbide ee qaybaha qodista saliida ayaa laga heli karaa qaababkan iyo cabirradani:
plum ubaxu nooca nozzles dunta
nozzles dunta laba geesoodka ah
iskutallaab dunta jeex jeex nozzles
Y nooca (seddex jeex jeex) dunta nozzles
giraangiraha gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida.
Shuruudaha kala duwan ee macaamiisheenna, waxaan ku hawlan nahay soo saarista, keenista, dhoofinta iyo ka ganacsiga noocyo kala duwan oo Tungsten Carbide Nozzles ah. Wax soo saarkani waa mid si aad ah ugu jajaban gobolka isla markaana hubiya nolol shaqeyneysa muddo dheer. Dhammaan alaabooyinkani waa sahlan yihiin in la rakibo waxayna u baahan yihiin dayactir hooseeya. Alaabooyinkan waxaa lagu heli karaa cabirro iyo tilmaamo kala duwan.
Alaabtu waxay leeyihiin duugis wanaagsan iyo saameyn ku caabbinta. Dunta waxaa laga samayn karaa carbide adag ama tikniyoolajiyad dejis ah iyo qalab dejin ah.
Waxaan soo saarnay noocyo badan oo kala duwan oo nozzles ah, sawir ka hooseeya tixraacaaga
Hore: Tungsten Carbide Disk for Madax
Xiga: Tungsten Carbide Wear Inserts iyo Harding oo wajahaya walxo